Izindawo zokudlela Chinese EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Izindawo zokudlela Chinese EYurophu
Evumelana okubabayo futhi echichima flavour Amazing, ukudla Chinese ezinhle KUNZIMA ngezinye izikhathi ukuthola eYurophu. Nokho, izindaba ezinhle wukuthi kukhona okukhulu zokudlela Chinese eYurophu - une ukwazi kuphi, futhi kanjani lapho. Njengoba iningi lawo emadolobheni amakhulu European noma izihloko, kungcono akukhetha ukufika ngesitimela.
With evuthiwe okusheshayo inethiwekhi isitimela ukuthi Europe inama, kungenzeka ukuthola kuphi ngezinsuku amahora - futhi ujabulele imizila ebabazekayo endleleni kanye. Kulabo kini ubani ifuna ukudla ukudla Asian, lapha kukhona okungcono zokudlela Chinese eYurophu, futhi kanjani lapho ngesitimela:
zokudla abaningi bagxile enikeza okuthile ikhasimende omkhulu ukunambitha. Nokho, Sea Sigodlo ekhatsi Amsterdam ihlose ukukunikeza nakho ukuthi ngeke nje uhlanganyele ukunambitheka yakho efihlekile kodwa futhi kube lula phezu kwamehlo. Elakhiwe njengomuzi mbhoshongo, kule ndawo yokudlela elintantayo iyindawo ephelele ukuze baphumule ezinye zezindawo ezingcono kakhulu ukudla Chinese laphaya.
Ilayisi izitsha, amadombolo, namabhanisi, entwasahlobo imiqulu - wena igama it, bonke bakumenyu futhi banambitha njengeqiniso njenge ukube ubuseChina. Yilokho kulindeleke kusukela omunye the best zokudlela Chinese eYurophu. Uma ufisa ukuthola Amsterdam ngesitimela, ungakwazi ukubamba ride isitimela esuka Paris, Berlin, kanye nezinye amadolobha aseYurophu.
Hanover Amsterdam Izitimela
Abangane Abahle futhi zokudlela eziphuma phambili ze-Chinese e-Europe - Berlin, Germany
Emzini chock-egcwele zokudlela Chinese, umenyezelwa omunye the best zokudlela Chinese eYurophu kunesithembiso anencazelo ekhethekile. Akhiwe Kantstrase, e Chinatown Berlin sika, Abangane Abahle kuyinto ukusungulwa lowo oziqhayisayo imenyu olunzulu ukudla eyiqiniso eyayithandwa kokubili asemaningi amaShayina futhi izivakashi.
Ngeke yonakale uma uvakashela Abangane Abahle lapho Berlin. ukuze ukufika Berlin, ungase uthathe isitimela esuka cishe noma yikuphi idolobha enkulu eYurophu futhi kube kungakapheli amahora.
Dortmund ukuze Berlin Izitimela
Dusseldorf ukuze Berlin Izitimela
Dresden ukuze Berlin Izitimela
Heidelberg ukuze Berlin Izitimela
Uma sicabanga Italy, ngokuvamile musa ixhume ukudla Chinese. Uma nawe uzizwa ngendlela efanayo., cishe uzoba umangale ukuzwa ukuthi amaNtaliyane ukwenza abe Ukhakhayi ngoba amakhono Chinese. Futhi omunye the best Chinese zokudlela nokudliwa kwayo eYurophu, Hangzhou, Ngokuqinisekile kufakazela ukuthi isimangalo.
It sihlanganisa ngamanye amathonya Italy, kodwa iningi menu ukudla Chinese oyiqiniso ukuthi kumelwe uzame uma uzithola eRoma. Tour Italy ngesitimela ukuthi lokho kwenzeke, noma ukuthatha Isitimela Rome kusukela komunye izihloko European.
Terni eRoma Izitimela
Foggia eRoma Izitimela
Grosseto eRoma Izitimela
Arezzo eRoma Izitimela
ICite Du Dragon impela iphakathi kwezindawo zokudlela ezihamba phambili zamaShayina eYurophu - eBrussels, Belgium
Enye yokudlela ukuthi inama kumnandi ingaphakathi futhi ingadi design eceleni izindishi zalo ezimangalisayo, Caphuna Du Dragon e Brussels is ngokufanele ngokuthi omunye the best zokudlela Chinese eYurophu. With kuka 300 izihlalo kanye engadini enkulu Ornamental, uyozizwa sengathi ungene iphupho efanele Oriental. Noma yimuphi dish liyamangalisa, kepha sizokhetha idim sum kanye nokukhethekile kwendlu, Peking duck, njengoba izinto ezimbili kumelwe uzame uma ungumuntu ngokuvakashela Brussels ngesitimela.
Bruges Brussels Izitimela
Maastricht Brussels Izitimela
Halle Brussels Izitimela
YaseGhent Brussels Izitimela
China Ikhishi Cha. 27 - Vienna, Austriaa
Ngo Chinatown e Vienna, China Ikhishi Cha. 27 ngokuvamile okukhulunywa njengoba omunye the best. Uma uthanda okubabayo yakho ukudla, lena yindawo. Banikeza ezinye izitsha engavamile ngaphezulu, ezifana ingwane isaladi, Nokho sincoma Ingungu Bao inkukhu uma ufuna ukunamathela zabuna. Ungakwazi kalula ukuhamba uye eVienna ngesitimela lamadolobha amadala kakhulu European ezinkulu, ngakho ungaphuthelwa ukuthi ithuba.
Dortmund eVienna Izitimela
Dresden eVienna Izitimela
Heidelberg eVienna Izitimela
Dusseldorf eVienna Izitimela
Ukulungele lokuphuza izitsha yohlobo ezinye zezindawo ezingcono kakhulu Chinese zokudlela nokudliwa kwayo eYurophu? Ukubhuka amathikithi akho isitimela ekuseni, futhi hop isitimela ukuthatha wena enkulu elandelayo adventure yakho gastronomical.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chinese-restaurants-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search, kule isixhumanisi uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml – ngaphakathi une izixhumanisi bethu / zu / kodwa ungakwazi ukushintsha it / fr / noma / de / noma / ke / bese ngezilimi ezingaphezu
#asianfood #BestChineseRestaurants #chinesefood europetravel amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela